China Truck Tyre Korea Butyl anatiny fantsona 11.00-20 orinasa sy mpanamboatra | Florescence
Valve: TR15 、 TR78A 、 TR179A
Images Sary amin'ny antsipiriany
Tube Butyl Inner Tube 11.00-20
Ampifanaraho amin'ny karazana valizy isan-karazany arakaraka ny takian'ny mpanjifa
◎ Fanaterana sy fonosana
Misy fomba famonosana roa: baoritra sy kitapo tenona.
Fonosana ataon'ny tsirairay: kitapo plastika mangarahara na kitapo miloko.
◎ Ny tombotsoantsika
1. fantsona anatiny vita amin'ny kodiarana butyl no aondrana indrindra mandritra ny 28 taona.
2. Ny fantsona anatiny dia misy teritery ambony amin'ny rivotra, ny elitika ary ny fanoherana
3. Ny entana rehetra dia hojerena miaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana mandritra ny 24 ora isam-bolana alohan'ny fandefasana.
4. Ekipa matihanina sy kalitaon'ny vokatra azo antoka.
5. Ny habe midadasika dia misy karazany amin'ny valves isan-karazany mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny tsena samihafa.
6. Ny fantsom-batana anatiny dia misy valin'ny hevitry ny mpanjifa.
Qingdao Florescence Co., Ltd.is dia mpanamboatra fantsom-bokotra anaty butyl matihanina manana traikefa mihoatra ny 28 taona any Shina. Ny vokatra indrindra ao anatin'izany ny fantsom-bozaka misy butyl ary ny tadin'ny fingotra.
Ny orinasantsika dia manana mpiasa 120 (ao anatin'izany ireo injeniera zokiolona 8, mpiasa antonony sy teknika 70 antonony sy zokiolona), izay fahaiza-manao famokarana lehibe indrindra ao amin'io orinasa io any Shina ary afaka mamaly ny baiko maika an'ny mpanjifa.
Ankoatr'izay, ny vokatray dia nandalo ny fanamarinana ISO9001: 2008 ary manana rafitra fitantanana maoderina sy siantifika ihany koa izahay izay manome vokatra avo lenta sy serivisy tompon'andraikitra.
Manantena izahay ny hametraka fifandraisana ara-barotra maharitra miaraka amin'ny mpanjifanay.
◎ Fampirantiana & ekipa
Izaho dia Cassie, tiako ny manangana zava-misy maharitra sy mifototra amin'ny tombony azo avy aminao. Tongasoa eto tonga hiaraka aminay, ny fanontanianao rehetra dia hovaliana ao anatin'ny 24 ora.
Izay fanontaniana rehetra azafady mba ampahafantaro ahy maimaimpoana, hanompo anao foana aho ^ _ ^
QINGDAO FLORESCences, ny safidinao tsara indrindra !!!
Manampy: Room 1608, Dingye International Mansion,
No. 54 Road Mosko, faritra Qingdao Free Trade Zone, Sina
Previous: 1000R20 1000-20 Tube Tyre Inner Tube
Manaraka: Butyl Car Inner Tube 175 / 185r14 ho an'ny Car Tyre
Tube fambolena Butyl anaty
Tube bisikileta Butyl anaty
Tube bisikileta Butyl anatiny